Warsaxaafadaeed Shirkii Golaha Wasiiradda | RADIO l TV l JUBBA	Home
Thursday, May 17th, 2012 | Posted by admin Warsaxaafadaeed Shirkii Golaha Wasiiradda
Shir ay maanta yeesheen Golaha Wasiiradda oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali, ayaa looga hadlay arrimaha dhameystirka xilliga Kala Guurka ah.
Waxaa lagu wadaa in Qabyo Qoraalka loo soo bandhigo shacabka maalmaha soo socda, si shacabku uga doodaan, uguna biiriyaan fikirkooda. Ugu dambeyntii golahu waxey ku ammaaneed guddiga qabanqaabada kuna dhiiri geliyeen in la sii dar-dar geliyo howlaha bacdamaa loo gudbayo marxaladdii labaad ee ah soo xulidda Ergada Ansaxinta Dastuurka oo la filayo in shirarkooda uu dhowaan ka bilowdo Muqdisho. Leave a Reply
Sh abdi osman fidhin: Ani waxaan dhihi lahaa haladoorto sheekh shakuul waxaan hubaa in uu dadka iyo dalka waxbadan uu...
Jamaal Warfaa: warkan maxamed amiin laleeyahay hala xidho maxkamadna hala saaro hana la xukumo. kani wuxuu u fiicnaa...
Jamaal Warfaa: warkan maxamed amiin laleeyahay hala xidho maxkamadna hala saaro
Jamaal Warfaa: anigu waxaan leeyahay hala doorto axmed madoobi doorkan isagaa kufiican dagalka iyo wax iska celintee.
Jamaal Warfaa: guul baan urajaynayaa shirkan. mahad oo dhan Allah baa iska leh. nimanka usoo halgamayna salaan ayaan...
xamar iyo neyroobi oo xiriirkooda xumaday xaalka waa sidee?
somaliya caasimad ayay u bahantahay
War yaroo igu saabsan Haddaan weedh ka caddeeyo Waa inaad wadartiinba Idinkoon i wagliilin Waa runtaa i dhahdaan
Akhri warbixintii gudiga xaqiiqa raadinta IGAD ka diyaariyeen kulamadii Muqdisho iyo Kismaayo
kismaayo iyo xamara ayaa dood u dhexeysaa maye xasan sheikh iyo dagaal ayaa is xiiseynayaa
admin 07:01 pm
admin 04:22 am
admin 03:35 pm
admin 06:36 pm
admin 04:02 pm
admin 05:30 pm
admin 06:48 am